May 2017 ~ Myanmar Anti Mlm Group
အားနာနာနဲ့ပဲ ပြောရဦးမယ် ။
အခု စလုပ်နေတဲ့ Futurenet ဆိုတဲ့
ကြော်ငြာ / web products တွေ အရောင်ပြပြီး
Member ဝင်ကြေး အဆင့်ဆင့်ကောက်ခံနေတဲ့
Poland က Company ကိုလည်း
နိုင်ငံတကာ Scam ထောက်လှမ်းဖော်ထုတ်သူ
Evan က Scam ( ငွေ လိမ်ညာမှု ) လို့ပဲ
လောလောဆယ် ကျွန်တော် ကြည့်မိသလောက်လည်း
သူနဲ့ အမြင်တူပါတယ် ။
တကယ် အဆင့်အရှိရှိ ငွေရှာလို့ရတဲ့
ရေရှည် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းတွေ
အများကြီး ရှိပါတယ် ။
အခုလို Product/Service တစ်ခုခုကို အရောင်ပြပြီး
တကယ်တမ်းမှာတော့ အောက်လူ နောက်လူတွေ
ထည့်ဝင်တဲ့ ပိုက်ဆံ နဲ့ အဓိက လည်ပတ်နေတဲ့
လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာ အချိန် သွားမပေးစမ်းပါနဲ့ဗျာ https://www.facebook.com/groups/myanmarmlmtruth/permalink/633964986796657/
Lucky time MLM company က က ဓာတ်စာတွေကို လေဖြတ်တာပျောက်တယ်လို့ပြောပြီးဆေး လိမ်ရောင်း
ကျနော် က မကွေးတိုင်း တောင်တွင်းကြီးမြို့ ရဲ့ ရွာလေးတရွာကပါ MLM ရဲ့ ဒါဏ်ကို ကျနော့ ရွာသားတွေ ခံလိုက်ရပါတယ် လေဖြတ်တဲ့ ရောဂါပျောက်တယ်လို့ LUCKY ဒိုင်း ( ဒိုင်းတော့ ဘ်ိုဒိုင်းလဲ မသိဘူး ) နဲ့ ချိတ် ဆေးတွေ လက်ငင်းဝယ် လူနာကို မပျောက်ရင် မပေးနဲ့လို့ ပြောပြီးကုတယ် တကယ်လဲ မပျောက်ရော လူနာက မပေးဘူး တာဝန်ရှိတဲ့ လူတွေက လေတလုံးမိုးတလုံးပြောတော့ ဘုမသိ ဘမသိ တောသူတောင်သားတွေက ယုံတာပေါ့ တလ လစာ ၇ သိန်းပေးမယ် ဘာညာဆိုပြီး စည်းရုံးတာ အ့ သူဒေါင်းစားတွေ တကယ်လဲ သူတို့ပြောတဲ့ အတ်ိုင်း မပျောက်ရော ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလှည့်ပတ်ပြောတာ ရှိသေးတယ် ဇူလီယံ ဆိုလားဘဲ ငယ်သူငယ်ချင်းတယောက်အ့မှ ရှိနေတယ် ဒီကောင်က သူ့အလုပ်က ဘာညာပေါ့ ဂျပန်ဒေ ကိုရီးယားတွေတော့ လွှတ်တယ် ဗျ အ့ကောင် ကို မကောင်းတတ်လွန်းလို့ ဘာမှ မပြောခဲ့ပါဘူး ဟူး ဒီ company တွေကို လူစုပြီး ဝိုင်းရိုက် ဒါမှ မဟုတ် တရားစွဲ တခုခုတော့ လုပ်သင့်တယ် ဗျို့ MlM တွေကို တခုခုလုပ်မယ်ဆို လက်တို့ပါ ခင်ဗျာ မသိနားမလည်တဲ့ ဆင်ရဲသား တောသူတောင်သူတောင်သားတွေကို လုပ်ရက်လွန်းတဲ့ အ့ ဒဒေါင်းစား တွေက်ို ဗျင်းချင်နေတာ ကြာနေပြီ ထိုင်းနိုင်ငံမှာလဲ ရှိတယ် ဗျ သွားကြည့်လိုက်ရင် ဗမာတွေ တိုင်းရင်းသားတွေ မသိနားမလည်တဲ့ သူတွေဘဲ ရှိတယ် တကယ် တချို့က တကယ် နားမလည်လို့ တချို့က ဘယ်လိုရှင်းပြရှင်းပြ လက်ကို မခံတာ တချို့က ခံနေရမှန်း သိပေမဲ့ ကိုယ် ကုန်ထားတာလေး ပြန်ရလိုရညား ဆက်လုပ်နေတာ ဟူး ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကျနော့ ရွာက လူတွေ လစာရတယ်ဗျ တလ 3000 ( သုံးထောင်ကျပ် ) လေတယ် တကယ် အ့ ပိုက်ဆံလဲ မယူတော့ဘူး တဲ့ ရွာလာရင်လဲ အ့ကောင်တွေ အသတ်ဘဲ လို့ ကြိမ်းထားတယ်တဲ့ ခိုင်းနွားလေး ရောင်းပြီး အ့ဒိ အကြွေးတွေ ဆပ်လိုက်ရတယ်တဲ့ ဟူး ကျနော်လဲ တကယ် မသိခဲ့ဘူး အ့ MlM တွေရွာထဲ ဝင်လာတာ ဒီတခါလာခဲ့ရင် ဝိုင်းရိုက်မယ် အ့ ခွေးဒဒေါင်းစားတွေ ကို
S-Coin အလိမ်အညာလား အစစ်အမှန်လား။
Bitcoin နဲ့ အခြား CryptoCurrency တွေ နာမည်ကြီးလာ၊ တန်ဖိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ အတုအပ လိုက်လံ ပြုလုပ်သူတွေလဲ ပေါ်ပေါက်နေကြပါတယ်။ အများစုဟာ CryptoCurrency အကြောင်း နားမလည်ပဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်သူတွေကို သားကောင်ထားတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကြောင့် လူတွေ Cryptocurrency လောကတစ်ခုလုံးကို မဝင်ခင်မှာပဲ ကြောက်လန့်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲက အကြီးဆုံး အလိမ်အညာ တစ်ခုကတော့ Ante Keleva တည်ထောင်တဲ့ Coinspace ပါပဲ။
Coinspace ဟာ အလ်ိမ်အညာတစ်ခုဆိုတာကို Bitcoin လောကသားတွေ၊ Cryptocurrency နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူတွေ အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အဓိက ပစ်မှတ်တွေကတော့ မသိနားမလည်သူတွေကိုပါ။ CoinSpace ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောပြပါမယ်။
အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ သူတို့ဟာ Binary Member System Pyramid တစ်ခုကို တည်ထောင်နေတာပါပဲ။ သင်ဟာ သူတို့ဆီမှာ Member ဝင်ပြီး သူတို့ကို သင့်အစား Mining လုပ်ခိုင်းထားနိုင်ပါတယ်။အဲဒိ Mining လုပ်တာကနေပြီး SCoin ဆိုတဲ့ Currency တစ်ခုထွက်ရှိလာမှာပါ။ အဲဒီ SCoin ကို သူတို့ပဲ Mining လုပ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ သူတို့ပဲ Mining လုပ်ထားတဲ့ SCoin ကို စတင်ဖြန့်ချီတဲ့အခါမှာ အဲဒီ SCoin ဟာ 1 Euro တန်ကြေးရှိမယ်၊ နောက်ပိုင်းကျရင် ဒီထက်ပိုပြီး ဈေးတက်မယ်လို့ သူတို့က ပြောကြပါတယ်။
အဲဒီဟာကို အရှင်းဆုံး ဥပမာပေးရရင်တော့ Coinspace ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘာသာ သူ့နာမည်နဲ့ သူ့ပုံနဲ့ ငွေစက္ကူတွေ ရိုက်ထုတ်နေပြီး အဲဒီလို ရိုက်ထုတ်တာကို ပရင်တာ ဝယ်ဖို့ Member ဝင်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီ Member ဝင်တဲ့သူကို သူရိုက်ထုတ်ထားတဲ့ ငွေစက္ကူတွေ ပေးမှာပါ။ ပိုဆိုးတာက အဲဒီငွေစက္ကူတွေ ရိုက်ထုတ်ပြီးစီးတဲ့အခါမှာ အဲဒီ ငွေစက္ကူတစ်ခုချင်းစီဟာ 1 Euro တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ CoinSpace ဆိုတဲ့လူက ပြောနေတာပါ။
Cryptocurrency တွေ ခေတ်စားလာလေလေ၊ အတုအယောင် လိမ်ညာပြီး ခေါင်းပုံဖြတ်သူတွေ များလာလေလေပါပဲ။ အများပြည်သူကို ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Cryptocurrency Community တစ်ခုလုံးက Coinspace ကိစ္စ တစ်ခုလုံးကို အတုအယောင်၊ အလိမ်အညာအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဟာကွက်နောက်တစ်ခုပြောရရင် သူတို့ဟာ အဲဒီ SCoin တွေကို ထုတ်လုပ် ပြီးစီးတဲ့အခါ ဝယ်ယူသူတွေထံ Email က ပို့မယ်လို့ ပြောထားခြင်းပါပဲ။ Cryptocurrency မှာ Wallet တစ်ခုကနေ တစ်ခုထံကို Blockchain ပေါ်ကနေ ပို့ရပါတယ်။Email ပေါ်က ပို့တယ်ဆိုတာ ယုတ္တိ မရှိပါဘူး။
original posted person.
Job Scam / သံသယရှိဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းပြလုပ်ငန်းများကြောင်း
MLM ကဲ့သို့သော အဖွဲ့များက မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ စားသောက်ကုန်နှင့်ဆေးဝါးများရောင်းချမှုတွေကို တွေ့ရှိသတင်း
ပေးပါက ခရိုင်စားသောက်ကုန်နှင့်ဆေးဝါးများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီက ချက်ခြင်းစိစစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း သထုခရိုင်ကျန်းမာရေး ဦးစီးမှူး၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးများကွပ်ကဲရေးကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါက်တာသင်းသင်းအိက သထုံခရိုင်သတင်းစဉ်သို့ပြောကြားသွားပါ သည်။
ဧပြီလ (၂၈) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော
တကယ့် ပြင်ပစားသုံးသူ / ဖောက်သည် / ကြော်ငြာရှင်တွေ မရှိသလောက်နည်းပြီး
အသင်းဝင်ကြေး / အသင်းဝင်အဆင့်မြင့်ကြေးတွေနဲ့ လည်ပတ်နေတာများလို့ပါ ။
၃။ Futurenet က အသင်းဝင်ကြေး ဖရီးနဲ့ ဝင်လို့ရတယ် ဆိုပေမယ့်
ဒီတော့ ဝင်ရင်းနဲ့ > လုပ်မိကြ > ရင်းမိကြ ကျွံမိကြ ဦးမှာပေါ့ ။
ရောင်းရငွေ အပေါ်မှာ ဆယ်ဆင့် အထိပေးတာ ။
၃၀% က မများပေမယ့် ပြဿနာက
ကျန်တဲ့ အဆင့်ကလူတွေက ၂၅% တောင် ဝိုင်းယူလိုက်ကြတာက မတရားရာ ကျတယ် ။
၁% ကနေ အမြင့်ဆုံး ၁၀% အထိပဲ ပေးတယ် ။
ဒါကြောင့် အပြင်ဈေးနဲ့ ယှဉ်နိုင်တာပေါ့ ။
ပြီးတော့ Levels အလိုက် ဒီ လိုပေးသွားဦးမယ်တဲ့ ။
ဒါနဲ့လည်း မပြီးသေးဘူး ။ Matching Bonus ကလည်း ပေးဦးမယ် ။
Leadership bonus ကလည်း 1% ကနေ 7% အထိ ထပ်ပေးဦးမယ် တဲ့ ။
ကဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ ။ နည်းတာမှ မဟုတ်တာ ။
အဲ့လောက်များတဲ့ အဆင့်ဆင့်ဆုကြေးတွေကို ဘယ်ကနေပေးနေလဲ ။
အောက်လူတွေ ထပ်ထည့်တာတွေ နဲ့ / ပစ္စည်းတွေ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို
ဒါကြောင့် ဘယ် လုပ်ငန်းကြီးတွေမှ PTC sites တွေမှာ မကြေငြာကြတာ ။
ကျွန်တော့် အမြင်တော့ FutureNet ဟာ
ဈေးကွက်က မရိပ်မိခင်လောက်အထိ အယုံသွင်းပြီး လူသစ်တွေ ထပ်ထပ်ထည့် ၊
နောက်ဆုံး လဲ ဦးမှာပေါ့ ။
နောက်က ဝင်တဲ့လူတွေ ခံပေဦးပေါ့လေ ။
Admin @ MLM Companies များကြောင့် နစ်နာခဲ့သူများ နှင့် MLM စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သူများ
Zinzae / သံသယရှိဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းပြလုပ်ငန်းများကြောင်း
ကျနော် MLM ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ မိတ်ဆက်ပွဲလေး တစ်ခု နှစ်ခါ သုံးခါ လောက်တတ်ဖူးပါတယ်။
ကျနော် MLM ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ မိတ်ဆက်ပွဲလေး
တစ်ခု နှစ်ခါ သုံးခါ လောက်တတ်ဖူးပါတယ်။
နယ် Leader တစ်ယောက်စင်ပေါ်တတ်ပြောတဲ့
လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်လောက်က ကျမ စင်ကာပူမှာ
ဆိုပြီး အတွင်းပစ္စည်းတွေ ရောင်းချပြီး ရပ်ကွက်ထဲ
အစပိုင်းရောင်းကောင်းပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ဆိုင်ခန်းခ
မီတာခ စားစရိတ် နေစရိတ် တွေနဲ့ အရှုံးပေါ်ပြီး
ဒုတိယအကြိမ် စိတ်ဓာတ်တွေ ကျခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့လိုနဲ့ ကျမ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ လမ်းမှာတွေ့ရင်
အစကတော့ ကျမလဲ မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။
နောက်ပိုင်း မိတ်ဆက်ပွဲတွေ Meetingတွေ တတ်ပြီး
ဆရာ ဆရာမတွေ သင်ကြားမှုကြောင့် ကျမဟာ အခုလို
ဟာ ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ ဓာတ်စာတွေ စားသုံးပြီးနောက်
အခုလို ဒေါင်းဒေါင်းမြည် ကျန်းမာနေတာပါပဲ။
ကျမ တစ်သက်မျှော်မှန်းမထားတဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ အားလပ်ချိန်
တွေကကို ဒီလုပ်ငန်းကနေရရှိအောင် မိတ်ဆက်ပေးတဲ့
ကျမရဲ့Upline မအဟွာကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အစစအရာရာ မိသားစုသဖွယ် ကူညီဖေးမ သင်ပြပေး
တဲ့ ကျမ Upline အပေါင်းကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အခုလို အလွန်ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်လှတဲ့ ဒီကုမ္ပဏီကို
မြန်မာပြည်ခေါ်ဆောင်လာပေးတဲ့ ဆရာဟိုဒင်း ကိုလဲ
အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 👏 👏 👏 👏 👏 👏
ကိုယ့်တွေလဲ သူများတီးတော့ လိုက်တီးတာပေါ့။
မတီးရင် ကိုယ်ကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် လုပ်ခံရမှာ။
လေးတွေ ကိုယ်စီမှာ ခေါ်လာတဲ့ ခေါင်းဆောင်ငယ်
ကိုယ်တွေလဲ အိမ်သာတတ်မယ်ပြောပြီး လစ်တာပေါ့။အပြင်မှာလဲ အစုအစုလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ စဉ်းစားပြီလေး သူဌေးဖြစ်ပြီး
😁 😁 😁အခုပြန်စဉ်းစားတော့မှ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း
တစ်ခုကိုတောင် အောင်မြင်အောင်မစီမံ မခန့်ခွဲနိုင်ပဲ
အခုကျနော်ကိုလာပြောကြည့် Ha Ha ပဲရမယ်။
Demigoddearyone / MLM ဆောင်းပါးများ
ဘယ်လို MLM Companies ကို ဝင်လုပ်သင့်လဲ ?
MLM စနစ်မှာကိုက နဂို အားနည်းချက်ရှိနေတော့
ဝင်လုပ်တဲ့လူ အနည်းဆုံး ၇၀% - ၉၀ % က အရှုံးပြနေမှာပဲ ။
ဒီတော့ ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါး မနစ်နာစေချင်တဲ့ လူတွေအနေနဲ့
MLM ကို လုပ်ကို မလုပ်သင့်ဘူး ။ ရှင်းလား ?
နိုင်ငံတကာမှာ MLM လုပ်နေတယ်ဆိုတာ အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ လော်ဘီ လုပ်သွားလို့
လွှတ်ပေးထားရတာ ။ ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းတွေ ထုတ်ပေးထားတယ် ။
ခက်တာက အဲ့ဒီ စည်းကမ်းတွေကို တကယ်တမ်း ဘယ် MLM Company မှ
သေချာ လိုက်နာ ကျင့်သုံးတာလည်း မဟုတ်ဘူး ။
( စည်းကမ်းတွေကို လက်တစ်လုံးခြား ကစားနေကြတာ များတယ် ။ )
ဒီ တော့ ဘယ်လို MLM Companies မှာ ဝင်လုပ်သင့်လဲ ...
လူများစုကို မနစ်နာစေချင်တဲ့ MLM Company ဟာ ဘယ်လို လည်ပတ်သင့်လဲ ဆိုတာကို
( စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ) ပြောကြည့်ရမယ် ဆိုရင် ...
၁။ အသင်းဝင်ကြေး / စာအုပ်စာတမ်း ကြေး / Website အသုံးပြုခ ဘာမှ မကောက်ခံရဘူး ။
၂။ ငွေရေးကြေးရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပါလာမယ်ဆိုရင်
ထုတ်ကုန် ရောင်းချတာနဲ့ ဆွဲဆောင်တာမဟုတ်ပဲ
ငွေရေးကြေးရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွဲဆောင်ဈေးကွက်ဖောက်တာမျိုး လုပ်မယ်ဆိုရင်
တစ်ခုခု အမှားအယွင်းတွေ ဖြစ်လာရင် လျော်ပေးနိုင်ဖို့
Company ဘက်က အနည်းဆုံး သိန်း ၂ သောင်း
အစိုးရကို တင်ပေးထားရမယ် ။
အသင်းဝင် အရေအတွက် တိုးလာရင် တိုးလာသလို /
ငွေလည်ပတ်မှု များလာရင် များလာသလို
အဲ့ဒီ စဘော်ငွေကို တိုးပြီး ပေးထားရမယ် ။
၃။ ပစ္စည်း နဲ့ ပတ်သက်လို့ရော / အကျိုးခံစားခွင့် နဲ့ ပတ်သက်လို့ရော
မဖြစ်နိုင်တာတွေ မက်လုံးပေးပြီး မပြောရဘူး ။
Company က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားတာကိုပဲ ပြောရမယ် ။
လူဟောင်းက လူသစ်တစ်ယောက်ကို အဲ့လို မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောပြီး ခေါ်လာတာ ဟုတ်မဟုတ်
Company က အရင် လူတွေ့စစ်ဆေးပြီးမှ
အသင်းဝင်ခွင့်ကို လက်ခံရမယ် ။
၄။ လုပ်သက်အလိုက် ရာထူးအလိုက် လူအင်အားအလိုက်
ဘယ်သူတွေက ဘယ်လောက်လောက် ရနေပါတယ် ဆိုတာ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပေးရမယ် ။
( ကိုယ် စားလှယ် နာမည် မပါလည်း ရတယ် ။ ပါရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ ။
အခွန်ကိစ္စပါ ပိုအဆင်ပြေသွားမယ် ။)
၅။ လက်ရှိ မှာ အသင်းဝင် အင်အား ဘယ်လောက်ရှိနေပြီ ဆိုတာ
အချိန်နဲ့ တပြေးညီ အမြဲ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပေးရမယ် ။
( ဒါမှ နောက်ဝင်မယ့်လူတွေက ကိုယ့် အတွက်
ဈေးကွက် ဘယ်လောက်ပဲ ကျန်နိုင်တယ် ဆိုတာမှန်းဆလို့ရမယ် )
၆။ ကုန် ပစ္စည်း တွေကို ပြင်ပဈေးကွက်သို့ အမှန်တကယ် ရောင်းချခြင်းကနေပဲ ဆုကြေးပေးရမယ် ။
လူဆွယ်လို့ / အောက်လူ ကို မလှိမ့်တပတ်နဲ့ မှိုင်းသွင်းပြီး ဝယ်သုံးခိုင်းလို့ရတဲ့ ဆုကြေးမျိုးတွေ မပေးရဘူး ။
( ဒီ အချက်ကို ပါးစပ်ဖျားကနေပဲ လိုက်နာချင်ယောင်ဆောင်နေတာ /
ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းဟာ ကုန် ပစ္စည်း တွေကို ပြင်ပဈေးကွက်ကို
အနည်းဆုံး ၇၀% ရောင်းချထားပါတယ် ဆိုတဲ့ သက်သေ ရှိရမယ် ။
ရောင်းချတိုင်း ဘောင်ချာ သေချာဖြတ်ပေါ့ ။ အဲ့လို သက်သေ သေချာမပြနိုင်ရင်
ဘာ ဆုကြေးမှ Company က မထုတ်ပေးရဘူး ။ )
၇။ အစိုးရဘက်ကလည်း MLM Company တစ်ခုဟာ
အသင်းဝင် အချင်းချင်း အောက်လူတွေရဲ့ ဝယ်အားအပေါ်ကနေ
အပေါ်လူတွေကို အကျိုးခံစားခွင့်ပေးနေတဲ့ Pyramid Scheme ပုံစံ ဖြစ်မဖြစ်ကို စောင့်ကြည့်ရမယ် ။
ပြင်ပဈေးကွက်ကို မဖြစ်မနေ ရောင်းချရမယ့် ရာခိုင်နှုန်း တစ်ခု
( အနည်းဆုံး ၅၀ - ၇၀% ) သတ်မှတ်ပေးရမယ် ။
မလိုက်နာတဲ့ Company ကို အရေးယူရမယ် ။
၈။ Company ဘက်က ပေးတဲ့ အကျိုး ခံစားခွင့်ဟာ
တကယ် စားသုံးသူနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရောင်းချပေးရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အများဆုံးပေးရမယ် ။
အပေါ်ကနေ လူခေါ် ပြီး / လေ့ကျင့်ပေးပြီး ထိုင်စားမယ့် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို
အကျိုးခံစားခွင့် ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ပေးထားရမယ် ။
ဥပမာ - ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကို ၆၀% ပေးမယ်ဆိုရင်
တကယ် ရောင်းချသူ ကို အနည်းဆုံး ၄၀% ပေးရမယ် ။
သူ့ အပေါ် အဆင့်ဆင့် ကို ၂၀% ထက် ပို မပေးရဘူး ။
ဒါမှ အောက်လူက လုပ်ရတာ အဆင်ပြေမှာ ။
( အသင်းဝင်ကြေး နဲ့ လက်လီဈေး အဟ ကို ခွါပေးထားတာဟာ
ပစ္စည်းတွေကို ပြင်ပဈေးကွက်ရောက်တဲ့ အခါ ပိုပြီး မလိုအပ်ပဲ ဈေးထပ်ကြီးစေတယ် ။
ဒါကြောင့် အဲ့ဒီ မလှိမ့်တပတ် စနစ်ကို ဖျောက်ပစ်ရမယ် )
၉။ MLM Company ကို လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့လာတဲ့ လူ နဲ့
ပစ္စည်း ဝယ်သုံးဖို့ လာတဲ့လူ သက်သက်စီကို ခွဲထုတ်ရမယ် ။
ပစ္စည်း ဝယ်သုံးဖို့ လာတဲ့လူ ကို လျှော့ဈေး များများ တခါတည်း ပေးထားရမယ် ။
( လုပ်ငန်း လုပ်တော့မယ် ဆိုရင် အဲ့ဒီ လျှော့ဈေး များများ ကို ခံစားခွင့် ရပ်ရမယ် )
လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့လာတဲ့ လူကို ပေးတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် အတိုင်း ပြန်စရမယ် ။
ဒါမှ ဒီ လုပ်ငန်းမှာ ဝင်လုပ်သူ ဘယ် % လောက်ပဲ
အဆင်ပြေတယ် အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ အတိအကျ တွက်လို့ရမယ် ။
( မဟုတ်ရင် မအောင်မြင်တဲ့လူတွေက
ပစ္စည်း ဝယ်သုံးဖို့ သက်သက် လာတဲ့လူတွေပါဆိုပြီး လွှဲချနေကြတာ ။ )
၁၀။ တကယ်ရောင်းအားရှိနေပေမယ့် Compensation/Marketing Plan ရဲ့ လှည့်ကွက်တွေကြောင့်
အကျိုးခံစားခွင့်မရလိုက်တာမျိုး မရှိရအောင် မျှတတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် ပုံစံထားရမယ် ။
( ဘာမှ မလုပ်ပဲ လူဆွယ်ပြီး ထိုင်စားဖို့ အဆင်ပြေအောင် မက်လုံးပေးတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် ပုံစံမျိုးကို ပြောင်းပစ်ရမယ် )
ဥပမာ - Binary Compensation plan စနစ်မှာ သုံးတဲ့
ဘယ်ညာ ညီအောင် လုပ်ပြီးမှ ခံစားခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုး ကို ပြောင်းပစ်ရမယ် ။
Binary စနစ်မှာ သုံးတဲ့ ဘယ်ဘက် အသင်းက သိန်း ၁၀၀ ဖိုး ရောင်းရပြီး
ညာဘက် အသင်းက တစ်ပြားဖိုးမှ မရောင်းရရင်
အကျိုးခံစားခွင့် လုံးဝ မရတာမျိုး ဟာ မဖြစ်သင့်ဘူး ။
( တခြား Matching / Leadership Bonus တွေ ဘာတွေ ခဏထား ။
လက်ရှိ အဲ့လို ဖြစ်နေတာကိုက အဆင်မပြေဘူး ။ မတရားဘူး ။ )
ကဲ ဒါတွေက အမြန် ရေးချလိုက်တာပဲ ။ ( နောက်ထပ် ကျန်သေးတယ် )
အခု ရေးထားသလောက်ကိုပဲ လိုက်နာနိုင်တဲ့ /
လိုက်နာနေတဲ့ MLM Company ရှိရင် ပြောလေ ။
MLM company တွေက ကျောင်းထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရန် လူဆွယ်
Anti Mlm Comment 30
Mlm ရဲ့ ဆိုးကျိုးနဲ့ရက်စက်မှုတွေက
ကျောင်းသားတွေကို စာမေးပွဲ မဖြေခိုင်းတော့ချင်း
အစိုးရမင်းများနဲ့ အမတ်များ ခင်ဗျား
ဆွယ်ခံရတဲ့သူတွေလည်း အဲလူတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ကြဗျာ Black List သွင်းလို့ရအောင်
အကောင့်ရှိရင် အဲအကောင့်နဲ့တွင်လာဆွယ်ရင် Video ရိုက်တင်ဗျာ ယူ့ကျုံးမရဖြစ်လွန်းလို့
ဟုတ်ပါ့ဗျာ ကျော့ Fri တွေလည်ထိတယ် TUကတော်တော်များများပဲကျနော့friဆ်ိုအ့MLMနဲ့နှစ်ယောက်EXAMကျဖူးတယ်ကိုယ်တွေ့ဗျ
မျောက်ကုန်သည် နဲ့ MLM
တစ်ရံရောအခါက ရွာတစ်ရွာတွင် လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး
မျောက်တစ်ကောင် ငွေ ၅၀၀၀ နှင့် ဝယ်မည်ဟု ကြေငြာသည်။
ထိုလူလည်း မျောက်ကောင်ရေ ထောင်ချီပြီး
တစ်ကောင် ၅၀၀၀ နှုန်းဖြင့် ဝယ်လိုက်သည်။
အလွယ်တကူ ဖမ်းမရတော့ချိန်တွင် ရွာသားများလည်း
ထို့နောက် ထိုလူပင် ထပ်ကြေငြာသည်။
ရှားသွားတော့မှ ရွာသားများ လက်လျှော့သည်။
ဈေးက တစ်ကောင် ၁၅,၀၀၀ ပေးမည်။ မျောက်များရှားသွားလိုက်သည်မှာ
ဖမ်းဖို့ မပြောနှင့် မြင်ရဖို့တောင် အနိုင်နိုင်ဖြစ်သွားသည်။
နောက်ဆုံး ထိုလူ ထပ်ကြေငြာသည်။
မျောက်တစ်ကောင် ၅၀,၀၀၀ ပေးမည်တဲ့။
သို့သော် သူ ခရီးသွားစရာရှိသဖြင့် အရောင်းအဝယ်ကိစ္စကို
"ဒီလိုလုပ် ခင်ဗျားတို့ မျောက်လည်းရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့
တစ်ကောင် ၃၀,၀၀၀ နဲ့ ပြန်ရောင်းပေးမယ်။
သူ့ကို ခင်ဗျားတို့ ၅၀,၀၀၀ နဲ့ရောင်းပေါ့။
ခင်ဗျားတို့ကို စေတနာရှိလို့ အကြံပေးတာပါ။"
ရွာသားများလည်း ရှိသမျှပိုက်ဆံထုတ်ပြီး တိုးဝှေ့ဝယ်ကြရာ
ထိုနေ့မှစ၍ ရွာသားများလည်း ဆရာနှင့် လက်ထောက်ကို
(Chilly Chan - Chilly's Joke Corner)
“လူတစ်ယောက်ဟာ မရသင့်တဲ့ ပစ္စည်းကိုလောဘကပ်နေပြီဆိုရင်
ထိုသူ အလိမ်ခံရဖို့ နီးစပ်နေပါပြီ ။
သတိသာ ထားဖို့ပြင်ပေတော့ ။
ဘာလို့လဲဆိုရင် လူလိမ်တွေက လောဘနဲ့မျှားပြီး
ကတုံးပေါ် ထိပ်ကွက်တတ်လို့ပါပဲ ။”
လုပ်ငန်း Scam တွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရသော အလုပ်လိုရှိသူများ
ကိုဇင်ဇေရေ ကျွန်တော်မသိလို့ မေးပါရစေ။ မနေ့က ကျွန်တော့်အသိညီလေးကို Telecom ကုမ္ပဏီဆိုပြီး သွားလျှောက်ခိုင်းပါတယ်။
၁။ ဖုန်းကုမ္ပဏီမှာ ၁ သိန်းခွဲနဲ့ Member စဝင်ရမယ်။ နောက်ထပ် လူလေးယောက်ရှာရမယ်။ တစ်ယောက်ကို ၁ သိန်းခွဲစီ ထပ်ပြီး Investment လုပ်ရင် မူလလူက တစ်ယောက်ကို ၇ သောင်းခွဲရမယ်။
၂။ နောက်ထပ် အဲ့လေးယောက်က ထပ် Member ရှာရင် ထပ်ပြီးတော့ ပိုက်ဆံရမယ်။
ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာ Telecom လို့ပြောရင် ဥပမာ- Huawei, Telenor စသဖြင့် နာမည်ခံထားရမယ်။ အခုဟာက ဘာနာမည်မှ ခံမထားဘူး။
ဒါကိုသံသယဖြစ်မိတယ်။ Product တစ်ခုကိုရောင်းချခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင် အဲ့ Product ရဲ့ Specification တွေ၊ Quality တွေ ရှင်းပြရမယ်။ ဘာတစ်ခုမှ ရေရေလည်လည်ရှင်းပြထားတာမတွေ့ဘူး။
ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းချတဲ့အခါ ၅၀% အမြတ်ပေးတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်မယုံဘူး။ များသောအားဖြင့် ၁% ကနေ ၁၀% လောက်ပဲပေးကြတာ များတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့်ကို လှမ်းတိုင်ပင်တဲ့ ညီလေးကို ပြန်လာလိုက်တော့လို့ပဲ ပြောလိုက်တော့တယ်။
ထူးခြားချက်တွေက အဲ့မက်လုံးတွေနဲ့ပဲ ဆွယ်သွားပြီး Product ရဲ့ နာမည်၊ Product ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံ ဒါတွေတစ်ခုမှပြောမသွားတာပါပဲ။
ဘယ်လိုမှ မယုံကြည်လို့ မလုပ်ခိုင်းတော့တာ မှန်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
Moe Yan Linn